मोती खोज्नु छ भने समुन्द्रमा डुब्न छालदेखि किन डराउने ? - Cambridge Institute of Technology
तपाईंको एउटा मुख्य काम र लक्ष्य छ तर, जब एकै छिन भनेर टार्नुहुन्छ तब त्यो काम कहिल्लै सकिँदैन । ‘आ जे सुकै होस एकछिन फेसवुक चलाउछु’ भन्नुहुन्छ । तर, अरुले गरेको पोस्ट चिहाउँदै दुई घण्टा वितेको पत्तो पाउनु हुन्न । युट्युवमा वेभसिरिज्, सिरियल, फिल्म हेरेर दिन वित्छ । एवं प्रकारले तपाई ट्विटर, इन्स्टाग्राम, इमोमा दिन विताउनु हुन्छ भने तपाईले आफ्नो सृजनशील समय नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ । आफुलाई टिकटक बनाउन नआएपनि अरुको टिकटक हेरेर रमाइलो मान्ने हामी धेरै छौं । एक अध्ययनले देखाएको छ, एउटा युवा सरदर दैनिक ४ घण्टा फेसवुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युवमा घोत्लिन्छ भने त्यो भयावह स्थिति हो ।
८ घण्टा काम गर्नुपर्नेमा ४ घण्टा सामाजिक सञ्जालमा ब्यतित गर्ने युवाले के प्रगति गर्ला ?
Previous Post इक्यानको नयाँ कार्य समितिलाई क्याम्ब्रिजको स्वागत सम्मान, आफ्नै भवन बनाउन सुझाव
Next Post क्याम्ब्रिज इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले एक दिने क्यानडा शैक्षिक सेमिनार हुने भएको छ ।